ရဲရင့်သက်ဇွဲ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 2
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – ရင်ဘတ်တွေနဲ့ တူးဆွ ပူဇော်
(ငြိမ်းချမ်းရေးဖခင်ကြီး ဒေါက်တာသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ ၂၃ မတ်လမှာကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ဦးခိုက်ပူဇော်မှု) ရင်ဘတ်တွေနဲ့တူးဆွ ပူဇော် ရဲရင့်သက်ဇွဲ မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၁၄ ခေတ်ကို ရင်ဘတ်တွေနဲ့ တူးဆွကြည့်ကြတဲ့အခါ ဧရာဝတီက...
မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၁၄ သံလွင် စစ်တောင်း ညာလက်မောင်း ဟေ့ စစ်မောင်းသံချီ ဒုဌ၀တီ …………………………………… …………………………………… ပြည်သူ့ ရဲ့ သွေး ပြည်သူ့ ရဲ့ သွေး ပြည်သူ...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ မတ်လ ၅၊ ၂၀၁၄ ညက အိပ်မက်တယ်….. အိပ်မက်ကလန့်နိုးတော့ ညဟာ တောကြီးမျက်မည်းထဲ ငုတ်လျှိုးလို့ နေလေရဲ့…… အိပ်မရတဲ့အတူ မထူးတော့တဲ့ညမို့တံခါးကို ဖွင့်တော့...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ မတ်လ ၃၊ ၂၀၁၄ အနီထဲက ကြယ်ဖြူတပွင့်ရဲ့စီးဆင်းခဲ့တဲ့ သွေးတွေ သမိုင်းရေးအရ ရာဇ၀င်ရေးအရ မတ် လဟာ အရေးကြီးတယ်။ အဲဒီ မတ်လရဲ...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ မတ်လ ၂၊ ၂၀၁၄ အပွင့်တွေ အနီပွင့်တွေ မြေပြင်အနှံ့ပြန့် ကျဲ သွေးတွေကျဲပက်ထားသလိုပ တပေါင်းဟာ အလျှံတငြီးငြီး တောက်လောင်နေပုံများ …..။ တပေါင်းရဲ...
နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်သက်တမ်း သမိုင်းသက်သေ …… ရဲရင့်သက်ဇွဲ အောက်တုိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃ ဖ၀ါးလက်နှစ်လုးံ ပုခုံး လက်နှစ်သစ် —————— ——————- ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော လူမသေဘူးတဲ့ အိမ်က မုံညှင်းဆီရှာသလိုမျိုး ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့လမ်းဟာ နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်သက်တမ်း...
နုိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ မှာ ရဲရင့်သက်ဇွဲ စက်တင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၃ နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ မှာ ကမ္ဘာကြီး မငြိမ်းချမ်းနိုင်သေးဘူး နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ မှာ နိုင်ငံတကာမငြိမ်းချမ်းနိုင်သေးဘူး နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ မှာ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေ မငြိမ်းချမ်းနိုင်သေးဘူး အင်အားသေးနိုင်ငံတွေ မငြိမ်းချမ်းနိုင်သေးဘူး...
ရှင်သန်ခွင့် ရဲရင့်သက်ဇွဲ စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၃ ငါတို့ ဟာ အမှောင်ခေတ်ကြီးထဲမှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ် …. မဟုတ်လား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ငါတို့ ဟာ အမှောင်ခေတ်ကြီးထဲမှာ ...
မိုက်ယုံတွင်မက မဲလည်းမဲတဲ့အကောင်တွေ ရဲရင့်သက်ဇွဲ သြဂုတ် ၁၄၊ ၂၀၁၃ ရာသီတွေက နရီစည်းဝါးမဲ့လာသလား ဘ၀ကပဲ နရီစည်းဝါးမဲ့လေသလား ကမ္ဘာမြေကြီးရော နရီစည်းဝါးမဲ့ပြီလား မေးခွန်းများနဲ့ကမ္ဘာမှာ ဝေဒနာတွေသာ ဒေသနာဖြစ်လို့ … ခံနိုင်ရည်ဆိုတဲ့အရာ...
ဖိုးချိုရေ ….. ငွေရတုတွေကြားက ငါတို့မှာသာ ……. ရဲရင့်သက်ဇွဲ သြဂုတ် ၈၊ ၂၀၁၃ ဝေးကွာခြင်းရဲ့ အတွင်းက သတိရတမ်းတခြင်းဝေဒနာ ဘယ်အရာနဲ့ များ ကုစားရမလဲ … ဖိုးချို တသက်တာဝေးကွာခဲ့ရတဲ့ နှစ်ကာလများဟာ...
ညီမလေး ၀င်းမော်ဦးအတွက် ကဗျာ ရဲရင့်သက်ဇွဲ သြဂုတ် ၇၊ ၂၀၁၃ ၁။ ညီမလေး ကမ္ဘာမြေ၀သုန် သိကြားစေ သက်သေညွှန်းတော့ ရာဇ၀င်တွေလည်း ရိုင်းခဲ့ရပြီ အဖိုးရေ နိုင်ငံတော်လည်း သွေးစွန်းခဲ့ပြီ အဖရေ …...
ကျိန်စာတွေနဲ့ငွေရတုတဲ့လား ရဲရင့်သက်ဇွဲ သြဂုတ် ၅၊၂၀၁၃ မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီညက ကြယ်တွေကြွေလိုက်တာ ကမ္ဘာပျက် မပျက်တော့ မသိဘူး ဗမာပြည်ပျက်သွားတာတော့ အသေအချာပဲ ၊ မျက်စိတမှိတ် လျှပ်တပျက်မှာ နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်တဲ့ ယုံနိုင်စရာတောင်မရှိဘူး ...
ခေတ်သစ် လွတ်မြောက်ရေးတေး ရဲရင့်သက်ဇွဲ ဇူလုိုင် ၂၄၊ ၂၀၁၃ Artist- Gustave Singier ၁။ မိုးခေါင်တော့ မိုးခေါ်တေးဆို မိုးကိုမျှော်နိုင်ကြတယ် ။ ဆင်းရဲမွှဲတေ ငတ်မွတ်မှုခေါင်တော့ ဘာတေးကိုဆို ဘာကိုမျှော်နိုင်ကြမလဲ ….။...
ငါ … မမှီလိုက်တဲ့ မနက်ခင်းအကြောင်း ရဲရင့်သက်ဇွဲ ဇူလုိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၃ ပန်းချီ – ပေါ်ဦးသက် အဲဒီနေ့ မနက်ခင်းကို ငါ မမှီလိုက်ပါဘူး အမေ့ရဲ့ဆွေးမြေ့ကြေကွဲအသံထဲမှာ လူကိုးဦးရဲ့ ...
အနာဂတ်ရဲ့ တွန်သံကြားတယ် ရဲရင့်သက်ဇွဲ ဇူလုိုင် ၇၊ ၂၀၁၃ နေ့ တွေ ညတွေ အချိန်ရထားကြီးအပေါ်မှာ မိုင်တိုင်များ တရိပ်ရိပ် တိတ်ဆိတ်ခြင်းများစွာဖြင့် ရက်စက်ကြေကွဲ အသံတွေမစဲဘူး ဒီလိုနဲ့… သွေးစွန်း...
ရ င် ကျိုးပွဲ ရဲရင့်သက်ဇွဲ ဇူလုိုင် ၆၊ ၂၀၁၃ ကောင်းကင်တခုလုံး မှုန်မှိုင်းရီဝေ ငါးဆယ့်တနှစ်တာ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရှာမတွေ့ ဘူး မလိုမုန်းတီးမှုတွေဟာ အရိပ်လိုထပ်ကြပ်မကွာ အလိုတူခြင်းမတူခြင်းတွေကို ကျော်လွှား...